Dhegeyso:Shir lagu dhisayo Dallad midaysa Ururada Dhalinyarada Puntland oo Garoowe ka furmay – Radio Daljir
Luulyo 26, 2015 3:31 b 0
Axad, Luuliyo 26, 2015 (Daljir)—Ururada Dhalinyarada Puntland ee ka dhisan gobollada ayka kooban yihiin deegaanada Puntland ayaa maanta waxaa Garoowe uga furmay shir ay uga arrinsan doonaan dhismaha Dallad guud oo midaysa Ururada dhalinyarada taaso oo qorshuhu yahay inlak dhiso.
Shirka oo ka furmay xarunta Wasaaradda Shaqadda iyo Shaqaalaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Puntland ayaa socon doona mudo afar barri ah, waxana kasoo qayb-galay xubno ka socda Ururada dhalinyarada guud ahaan gobollada Puntland.
Furitaanka shirka oo ayka hadleen mas\_’uuliyiin ka tirsan waaxda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha, iyo xubno ka tirsan Ururada Dhalinyarada ayaa looga hadlay masiirka dhalinyarada Puntland iyo ahmiyada ay leedahay dhismaha Dallada guud, waxaana dhalinyarada Ururada matalayey ee madasha ka hadashay sheegen inayka go,an tahay hirgelinta dhismaha Dallada guud waxana ay tilmaamen inay door muuqda ka qaatan doono horumarinta Dhalinyarada Puntland.
Dhegeyso Warbixin uu ka diyaarshay furitaanka shirka Wariye Maxamed Fowsi oo ka dirsan howlwadeenada Daljir.
Dhegeyso:Waraysi ku saabsan Arrimaha M/weyne Obama u joogo Dalka Kenya